January 10, 2021 - ApannPyay Media
အိမ်မှာ မစိုက်သင့်သည့် ဂမုန်း ၃မျိုး…
March 1, 2021 January 10, 2021 by ApannPyay Media
အိမ်မှာ မစိုက်သင့်သည့် ဂမုန်း ၃မျိုး ဂမုန်းဆိိုတဲ့ အပင်မျိုးနွယ်လေးကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် သိပ်မစိမ်းတဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရှိတဲ့ အပင်များစွာကို ဂမုန်းလို့ခြုံငုံ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့ တချို့ဂမုန်းပင်တွေက အပင်ကြီးတွေမှာ တွယ်ကပ်ပေါက်တက်တဲ့ အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်က မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဂမုုန်းပင်လေးတွေကို စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ဖို့၊ ရာထူးအာဏာ တိုးတက်ဖို့၊ ဧည့်ကောင်းဆောင်ကောင်းလာဖို့၊ မီးကွင်းဖို့၊ သူခိုး-ဓားပြ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ ဆိုပြီး ခြံဝန်းထဲမှာ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသလို အခုခေတ်မှာတော့ အိမ်တွင်းအပင်လေးတွေ အဖြစ်ပါ စိုက်ပျိုးလာကြပါတယ်။ ဒါက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် ဂမုန်းပင်တွေထဲမှာမှ အိမ်တွင်းမှာ လုံးဝမစိုက်ပျိုးသင့်တဲ့ အပင်တွေကလည်း ရှိနေပါတယ်။ အဲအပင်(၃)မျိုးကို စိိုက်ပျိုးရေးဝါသနာရှင်တွေ သထိထားဆင်ခြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဆင်စွွယ်ဂမုန်း ဆင်စွယ်ဂမုန်းကတော့ မြေကြီးမှ တစ်ပင်ချင်းပေါက်တဲ့ အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒန့်သလွန်သီးနဲ့ အပင်ချင်းတူပါတယ်။ ဆင်စွယ်ဂမုန်းဟာ … Read more
တစ်နေ့ကို ငွေတစ်သိန်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့ လျှော်ဖြူပင်အကြောင်း လေ့လာလိုသူများအတွက်
January 10, 2021 by ApannPyay Media
တစ်နေ့ကို ငွေတစ်သိန်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့ လျှော်ဖြူပင်အကြောင်း လေ့လာလိုသူများအတွက် “မင့် ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါကွာ၊ တစ်နေ့ငွေတစ်သိန်းဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွ”မိမိပြောစကားအပေါ်စိုက်ပျိုးရေးမိတ်ဆွေ အစ်ကိုကြီးတစ်ဦး၏ စူးစမ်းသံဖြစ်၏။ သူ့အသံတွင်မယုံတစ်ဝက်၊ယုံတစ်ဝက်ဖြစ်နေသည်ကို မှန်းဆနိုင်သကဲ့သို့ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင်လည်းအားတက်သည့်အမူအယာ အပိုင်းအစကိုတွေ့မြင်နေရ၏။ မိမိအနေဖြင့်ထိုစကားမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အသိုင်းအဝိုင်းမှသယ်ဆောင် လာသည်ဖြစ်၍ သံသယဖြစ်ရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြလိုက်၏။ ထိုအခါမှ “ငါ့အဖို့ကတော့ကွာ တစ်နေ့တစ်သိန်းမဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်နေ့တစ်သောင်း ရတယ်ဆိုလည်းကျေနပ်တယ်မောင်” ဟု သူ၏ အနိမ့်ဆုံး တစ်နေ့တာလျာထားဝင်ငွေကို ဖွင့်ဟလေတော့၏။ “ဒါဆို ဒီလိုလုပ်ကွာ၊ မင်း ပြောတဲ့နေရာကိုသွား၊ ပျိုးပင်ဘယ်မှာရမယ်၊ဘယ်လိုစိုက်ပျိုး ပြုစုရတယ်၊ ဘယ်လို ထုတ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားလေ့လာြပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့၊ြပြီးရင် မင်းပြောတဲ့အကျိုးအမြတ်ဆိုတာနဲ့ စျေးကွက်အခြေအနေတွေကိုပါစုံစမ်းပေး”ဟုပင် အားတက်သရောတိုက်တွန်းနေလေ၏။ မိမိအနေဖြင့်လည်း ကိုယ်တင်ပြသည့် ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားမှုတွေ့ရသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာ လိုသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ထိုနှစ်ကြောင်းမျှဖြင့် ဤလေ့လာရေးခရီးကိုစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ဤလေ့လာရေးခရီးကို လျှော်ဖြူ (ခေါ်)ဆေးကုလားမ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး … Read more
ဆန်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်ပိုရှည်လာအောင် ပြုလုပ်နည်း
ဆန်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပြီး ဆံပင်ပိုရှည်လာအောင် ပြုလုပ်နည်း ပျိုမေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဆံပင်အရှည်ကြီးက ကိုယ့်ကို ပိုမိန်းကလေးဆန်စေပြီး ပိုလှစေပါတယ်။ သင်က နဂို ရှည်တဲ့နှုန်းထက် ဆံပင်ကို ပိုရှည်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆန်ဆေးရည်အကူအညီကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ ဆံပင်ရှည်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ ဆန်မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိုက်၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းမှာ ဆန်အပြင် ဆန်ဆေးရည်ထည့်ဖို့ ဗူးနဲ့ Spray ဗူးတစ်ဘူးကိုပါ လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဆန်ပမာဏထဲကို ရေထည့်ပေးရပါမယ်။ ပထမတစ်ခါ ဆန်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ပြီး မှောက်ချရပါမယ်။ ဒုတိယတစ်ခါ ဆန်ဆေးရည်ကိုယူပြီး ဗူးထဲ ထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒီဗူးကို Shake ပြီး တစ်နာရီထားပေးရပါမယ်။ ပြီးနောက် ဒီအရည်ကို Spray ဗူးထဲ ပြောင်းထည့်ပေးရပါမယ်။ Spray ဗူးနဲ့ ဆံပင်အရင်းအဖျားတွေဆီ … Read more
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အိမ်တွင်း ပတ်ပတ်လည်အတွက် ဆားရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေ
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အိမ်တွင်း ပတ်ပတ်လည်အတွက် ဆားရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေ ကိုယ့် အိမ် မှာရှိတဲ့ တချို့ မီးဖိုချောင် ပစ္စညး် တွေက ဟင်းချက် ရာမှာပဲ အသုံးတည့်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး နှင့် အခြားသော နေရာတွေမှာလည်း တကယ်အသုံးဝင်တာကို မြင်တွေ့ရပါတယ် ။ ဆား များများစားတာကတော့ ကျန်းမာရေး အတွက် မကောင်းပါဘူး ။ သို့သော်လည်း ဆားဟာ သင့်ရဲ့ အိမ် မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ တချို့သော ပြဿနာ ရပ်တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင််ပါတယ် ။ ၁။ ဘေစင် ရှိ ရေစစ် ကိုသန့်ရှင်းနိုင်ခြင်း ဘေစင် မှာ အညစ်အကြေး တွေစို့ပြီး ရေကောင်းကောငး်မဆင်းတာကို အိမ်တိုင်းနီးပါး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ ။ … Read more
သင်သိလား ကြက်ဥတွေ ဘာလို့အရောင်မတူတာလဲ
သင်သိလား ကြက်ဥတွေ ဘာလို့အရောင်မတူတာလဲ အိမ်နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်ကို စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအနေနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါတယ်။ ဥပမာ…. ငရုပ်သီးတွေကို အရောင်ကြည့်ပြီး ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ အနီရောင်ငရုပ်သီးဆိုရင် ဘယ်အရသာ၊ အစိမ်းရောင်ငရုပ်သီးဆိုရင် ဘယ်အရသာ၊ လိမ္မော်ရောင်ငရုုပ်သီးဆိုရင် ဘယ်အရသာအစရှိသဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥတွေမှာကော အရောင်ကိုကြည့်ပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါသလား။ အမျိုးအစားခွဲခြားဖို့ကော လိုပါသလား။ ကြက်ဥအမျိုးအစား ဘယ်နှမျိုးရှိ စူပါမားကက်တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စျေးတန်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကတွေ့ရမယ့် ကြက်ဥအရောင် (၂) မျိုးကတော့ အဖြူရောင်နဲ့ အညိုရောင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥ အဖြူရောင်နဲ့ အညိုရောင်ဆိုပြီး ကွဲပြားနေရခြင်းရဲဲ့ နောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုမျိုးအရောင်တွေကွဲပြားနေရတာလဲ။ အထဲမှာပါတဲ့ကြက်ဥအရသာကတော့ တူတူပါပဲ။ နောက်ပြီး ကြက်ဥမွှေကြော်လုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း တူညီတဲ့အရသာပဲထွက်လာမှာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဘာလို့ အခွံအရောင်တွေ … Read more
ငွေပြတ်သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့) လှူကြည့်ပါ
ငွေပြတ်သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့) လှူကြည့်ပါ ငွေ ပြတ်သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့) လျူကြည့်ပါလား လက်တွှေအစွှမ်းမို့ မဖတ်အားသေးရှယ်ထားကြပါ ကြွေပန်းကန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်.လင်ဗန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်မုန့် ၅ ခုထည့်.ပေါင်မုန့်ပေါ်ကို ကိတ်မုန့်၂ ခုတင်.နို့ဆီ ဆမ်း.ပြီးအိမ်ကဘုရားမှာ မုန့်ဆွမ်းလှူရင်း ငွေကိစ္စကို ဆုတောင်းရတာလေ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက် ၁ဝး၃၀.မိနစ်ကနေ နေ့၁၂ နာရီ မထိုးခင်ကြားမှာ လှူရင် ပိုတောင်မြန် သေးသဗျ။ ကြာသပတေးနေ့ မနက် ရး၃၀ မိနစ် မထိုးခင်ထပ်ပြီး လှူလို့ရသေးတယ်။ အဲဒါ တနင်္လာနံ အခက်အခဲ မျိုးစုံ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အလှူပေါ့ဗျာ။ ယုံကြည်ရင် နှစ်ကြိမ်တော့ လှူပေါ့.မယုံကြည်ရင် မလှူ နဲ့ပေါ့..ဘာခက်တာမှတ်လို့ဗျာမနက်ဖန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပဲဗျ..မမေ့နဲ့ပေါ့။ သိင်္ခမောင်ဝ၉၆၇၈၃၃၅၅၅၉ ေငြျပတ္သြားတဲ့ အခါဒီလိုေလး (ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔) လွဴၾကည့္ပါ ေငြ ျပတ္သြားတဲ့ … Read more
January 10, 2021 January 10, 2021 by ApannPyay Media
ဂျင်စင်းထက် ၄၄ ဆ အစွမ်းအာနိသင်ရှိသော မြန်မာပြည်ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှ ဓနိဖူးခြောက် ဆီးချို၊ သွေးတိုး နဲ့ သွေးတွင်းအဆီဓါတ်တွေကို ခြေဖျက်နိုင်တဲ့ ဓနိဖူးခြောက် . ဓနိဖူးခြောက် ရခိုင်မှာဆိုတော့ဓ နိပေါတယ်။‌ ရေခြောက်ခပ်သလိုမျိုး ဓနိဖူးခြောက်ကို ရေနွေးထဲထည့်သောက်လို့ရတယ်။ အဖြူရောင်မဖြစ်မချင်း အာနိသင်မပြေဘူး။ အာနိသင်တို့ကတော့ သွေးတိုး ဆီးချို သွေးတွင်းအဆီဓါတ်တွေကို ခြေဖျက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ အစာအိမ်သမားများအတွက်လည်းသက်သာစေတယ်။ အစွမ်းထက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဂျင်စင်းထက် ၄၄ ဆပိုပြီး အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က ဓနိဖူးခြောက်အကြောင်း ဓနိပင်သည် ပင်လယ်ရေငန်ရောက်သော ဒီရေတော များတွင် ဖြစ်ထွန်း သည်။ အုန်းပင်ပေါက်နှင့် ဆင်တူပါသည်။ အခြား သီးနှံများ ကဲ့သို့ ဓာတ်မြေသြဇာ ကျွေးရခြင်း၊ ပေါင်းမြက် ရှင်းလင်းခြင်း လုံး၀ လုပ်စရာ မလိုသောအပင်ဖြစ်ကာ ဒီရေ များနှင့် ပါလာသော … Read more
မုန်လာဥဖြူ စိုက်ပျိုးရန် နည်းစနစ် မြေအမျိုးအစား ဥအတွက် စိုက်ပျိုးသောအပင်မျိုးဖြစ်သဖြင့် မြေကြီးနက်နက်ထိ မြေသားပွရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြေသြဇာထက်သန်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး အသင့်လျော်ဆုံးမြေအမျိုးအစားမှသဲနှုန်းမြေဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သဲဆန်လွန်းသောမြေ၊ စေးလွန်းသောမြေတို့မှ အပအခြားမည့်သည့်မြေတွင်ဖြစ်စေ၊ သဘာဝမြေသြဇာ လုံလုံလောက်လောက် ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးလျှင်လည်း ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။ စိုက်ရာဒေသ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရာသီဥတု အအေးကြိုက်ပင်ဖြစ်၍ သင့်လျော်သောအပူချိန်မှာ (၆၀)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းထက်မကျော်သင့်ပါ။ သို့သော်မြန်မာပြည်တွင် (၇၅ ံ)ဖာရင်ဟိုက်ထက်ကျော် သောဒေသများတွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော မျိုးများကို စိုက်ပျိုးနေပြီဖြစ်သည်။ မိုးရေကို အားကိုးစိုက်ပျိုးသောဒေသများတွင် တစ်နှစ်မိုးရေချိန်ပျမ်းမျှ (၅၅)လက်မ ကျော်ရမည်။ မိုးရေချိန် (၄၀)လက်မထက် လျော့နည်းလျှင် မဖြစ်ထွန်းပါ။ အပူချိန်မကိုက်ညီပါက ဥသေးခြင်း၊ အမျှင်များခြင်း၊ ပုံသဏ္ဍာန်မကျခြင်းနှင့် အနံ့ပြင်းခြင်းစသည့် ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ မြေပြုပြင်ခြင်း စိုက်ခင်းမြေဘောင်ပြုပြင်ရာတွင် အလျားကို … Read more
အကြောထုံးခြင်း အကြောများဆိုင်းပြီး သွေးကြောပိတ်ဆို့ ရောင်ရမ်းလာခြင်း ဖြစ်လျှင်..
January 27, 2021 January 10, 2021 by ApannPyay Media
အကြောထုံးခြင်း အကြောများဆိုင်းပြီး သွေးကြောပိတ်ဆို့ရောင်ရမ်းလာခြင်း ဖြစ်လျှင် အကြောထုံးခြင်း ( Varicose Veins ) အကြောများဆိုင်းပြီး သွေးကြောပိတ်ဆို့ရောင်ရမ်းလာခြင်းကို ဆေးပညာအရ varicose veins လို့ခေါ်ပါတယ်.. များသောအား ဖြင့် ခြေသလုံး ခြေမျက်စေ့ နဲ့ ခြေထောက်တစ်ခွင်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး သွေးကြောအဆို့ရှင်များအားနည်း၍ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုနည်းလို့ သွေးလည်ပတ်မှုနည်းခြင်း နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖိအားကို ခြေထောက်ကမတန်တဆခံရခြင်းစတာတွေကြောင့် ဒီရောဂါဖြစ်လာပါတော့တယ်.. အဲဒီလိုပိတ်ဆို့ခြင်းက ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် လွန်ကဲစွာ အကြောထုံးလာခဲ့ရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါအန္တာရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်.. အလှုပ်အရှားနည်းသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အရွယ်မတိုင်မီအ၀လွန်သူများ နှင့် ကိုယ်၀န်ဆောင်အမျိုးသမီးများ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်.. မျိုးရိုးရှိလို့ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်.. ရောဂါလက္ခဏာများကတော့ (၁)ခြေထောက်ရောင်ကိုင်းခြင်း (၂) သွေးကြောများယားယံခြင်း (၃) အရေပြားအရောင် ပြောင်းလဲသွားခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်.. အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပါ (၁) ကောင်းစွာသွေးလည်ပတ်စီးဆင်းခြင်းက အကြောထုံးဝေဒနာ (လုံး၀)မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် … Read more